दैनिक जीवनमा बौद्ध धर्म - चान बौद्ध धर्मको प्रकृति।
सबै जीवनमा BUDDISISM
शैलिंग टेम्पल यूरोप
दैनिक जीवनमा सोचविचार गर्दै
मेरो नाम शि हेg जिन हो
एक सांसारिक नाम रेनर Dehhle को साथ
र यदि तपाइँ तपाइँको नयाँ चान मास्टर चाहनुहुन्छ भने। चान मास्टर अलार्म घडी जस्तो हुनु पर्छ, अलार्म जस्तै हो जुन बिहान हामीलाई ओछ्यानबाट उठाउँछ। उसले हामीलाई 'उठ्न' मद्दत गर्नुपर्दछ, औंलाले औंलाले औंला औंल्याए।
जीवन जुन तरिकाले खेल्दछ, म कहिले पनि बौद्ध गुरु हुन चाहन्न, मलाई किन?
डीप डाउन, यद्यपि मलाई थाहा छ कि म यो कार्य पूरा गर्न सक्दछु, आवश्यक छ, र अन्यथा होईन।
30० बर्ष भन्दा पहिले म चीन गएँ, विश्व प्रसिद्ध शाओलिन मन्दिरमा, हेनान प्रान्तको बौद्ध विहार। त्यहाँ मठको भिक्षुहरूसँग लामो समय बसें, साथीहरू बनाए, कुung फू सिके र बुद्धको शिक्षासँग सम्पर्कमा आएँ।
जब एबट शि योong जिनले मलाई २००० मा शाओलिन मन्दिर जर्मनी फेला पार्न आग्रह गरे, महान् शिक्षकको भावना मसँग नजिक भए र नजिक आए।
एक प्याज जस्तै राम्रो चान मास्टरले पुरानो व्यक्तित्वको अर्को पछि एक लेयर हटाउन सक्छ, 'ज्ञान' को विषयवस्तुलाई बारम्बार अगाडि ल्याउन सक्छ, र जगाउन पछि मद्दत गर्दछ।
म तपाइँको अलार्म घडी, तपाइँको अलार्म हुन चाहान्छु, मानिस जो तिमीसँग उठ्दा तपाइँसँगै आउँछ।
तपाईंको मास्टर, तपाईंको शिक्षक, यात्रामा तपाईंको साथी, तपाईंको साथी।
नयाँ कपडामा बौद्ध धर्म
यो एक लामो प्रक्रिया थियो जसले मलाई बौद्ध बनायो।
तपाईं भन्न सक्नुहुन्न कि यो रातारात भयो।
मेरो युवावस्थामा मलाई बुद्धको शिक्षामा कुनै रुचि थिएन, म केवल कर्म, ज्ञान वा पुनर्जन्मको कुरा गर्ने व्यक्तिहरूमा हल्का हाँसे।
कुung्ग फूले पवित्र मान्छेको दर्शन मलाई धेरै भन्दा बढी परिचित गरे, तर मैले यसलाई गम्भीरताका साथ लिएन। तर म उनको विचारहरुमा बढि चासो लिन चाहन्थें, जीवनमा शान्तिमय र शान्त दृष्टिकोणले मलाई अधिक चाहना गरायो।
बौद्ध धर्ममा पढ्ने मेरो प्रयास पनि सफल भएको थिएन। या त मैले पुरानो पाठहरू भेट्टाएँ, लामो-भाषाको भाषामा लेखिएको, पढ्न सजिलो छैन र कत्ति पनि बुझ्न गाह्रो छ, वा मैले धेरै ऐतिहासिक, ऐतिहासिक विचार पाएको छु।
मैले उनको शिक्षाको ज्ञान, ज्ञानको सारको बारेमा केवल अत्यन्त अस्पष्ट शब्दहरू पाए। मलाई आज किन थाहा छ। बुद्धले आफैंलाई जागरणको लागि कहिले पनि मार्गनिर्देशन छोड्नुभएको थिएन किनकि ती लेखनका धेरैजसो लेखकहरूले आफैंमा आत्मज्ञान अनुभव गरेका छैनन्।
ज्ञानको अनुभव बिना, तथापि, बौद्ध धर्म मा ग्रन्थहरु लेख्न हुँदैन। जब मेरो जीवनी "शाओलिन-रेनर" २०१ 2019 मा देखा पर्‍यो, धेरै मानिसहरूले मलाई सोधे: "राइनर, किन तपाई कागजमा आफ्नो विचार राख्नुहुन्न"?
वकिलको हैसियतमा मलाई धर्मशास्त्र लेख्न गाह्रो छैन तर के म बुद्धको शिक्षाको बारेमा लेख्छु?
थोरै शंकाका साथ मँ सहमत भएँ र यो मेरो ब्लग कसरी सिर्जना गरियो, जुन धेरै छोटो समयमा लाखौं व्यक्तिमा पुग्यो र अब विश्वभर १ 160० भन्दा बढी भाषाहरूमा पढ्न सकिन्छ।
मेरो दृष्टिकोणमा, बौद्ध धर्म कुनै धर्म होइन, यो एक दर्शन र विश्व दृश्य हो।
बुद्धले कहिल्यै भगवान जस्तो महसुस गरेनन, उनले स्पष्ट भने कि उनको पूजा गर्नु हुँदैन। उनले आफ्ना अनुयायीहरूलाई ज्ञान खोज्न सल्लाह दिए।
दैनिक जीवनमा बौद्ध धर्म भनेको दैनिक जीवनमा सचेत हुनु हो।
म, रेनर डीहले, पहिलो मान्यता प्राप्त जर्मन शाओलिन हुँ र बर्लिनमा शाओलिन टेम्पेल डियुशल्याण्ड स्थापना गर्‍यो र धेरै वर्षसम्म यसलाई निर्देशित गरें।
म सरल र बुझ्ने तरिकामा चान (जेन) बौद्ध धर्मको प्रकृति वर्णन गर्दछु; दैनिक अभ्यासका विभिन्न तरिकाहरू उदाहरणीय र बुझ्न सजिलो हुन्छन्।
मेरो नयाँ पुस्तक अब पसलमा छ!
म मेरा सबै साथीहरू र परिचितहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु जसले मलाई मेरो जीवनभरि साथ दिएका छन् र यस दिनको अनुसरण गर्दै छन्। यी हुन्: मेरा आमाबुवा र छोरी, मेरा मास्टर शि यान जी, अबोट शि योंग जीन, ताईमा, टा, टियान टियान एन्ड एफ एफवाई, जर्ज, रोल्फ लिम, कारस्टन अर्न्स्ट, शि हेन्ग जोंग, मेलेना, कार्टेन रमर, जान आर।, बिन, हेन्ज, यान्निस, लुफ्ती, माइकल, पीटर, ओमी, टियान सि, स्टीफन हथौड़ा, आन्द्रे मेविस, बिली, ट्रौडी, रेनर ह्याकल, हर्ज, रोमानो, मार्टिन, एशले, डा। कुरा। मेरो मित्र कार्ल क्रोनमलरलाई विशेष धन्यवाद, जसले शाओलिन-रेनर पुस्तकबाट सम्पूर्ण कुरा सुरु गर्नुभयो, र स्वेन ब्युटेम्यान, जसले मलाई यस पृष्ठको लागि लेख्नको लागि अनन्त धकेले।
Abbot शाओलिन मन्दिर चीन
शि यान जी
वरिष्ठ मास्टर शाओलिन मन्दिर यूके
शि हेन्ग Zong
Abbot शाओलिन मन्दिर Kaiserslautern
शि हेन्ग यी
शाओलिन मन्दिर कैसरस्लाउटरका प्रमुख मास्टर
मेरो मास्टर शि यान जी
यान जीसँगको भेटले मेरो जीवनलाई धेरै परिवर्तन गर्‍यो। त्यस समयमा मठमा उहाँसँग कुरा गर्दा यस संक्षिप्त क्षणले मेरो लागि के अपार परिवर्तन ल्याउने मलाई थाहा भएन। आज शि यान जी इ England्गल्यान्डको शाओलिन मन्दिरको आदरणीय Abbot Shi Yong Xin को तर्फबाट नेतृत्व गर्दछन्। शिफू (मास्टर) शि यान जी, मठाधीशको उच्च माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीहरू मध्ये एक हुन् र G 34 औं पुस्ताको शाओलिन भिक्षुहरू मध्ये एक अग्रणी GongFu मास्टर हो। शि यान जी १ 1983 1987 मा शाओलिनको मार्शल आर्ट कलेजमा शिक्षा प्राप्त गरे र १ XNUMX XNUMX मा एबोट शि योंग जिनको प्रत्यक्ष विद्यार्थी भए।
सबै दुष्टबाट अलग रहँदै, सबै राम्रो बनाएर, इन्द्रियहरूलाई शुद्ध पार्दै। यो बुद्धको स्थिर पोशाक हो।
त्यसोभए बौद्ध धर्मले हामीलाई जिम्मेवारी सिकाउँछ, यसले हामीलाई देखाउँछ कि हामी के गर्छौं र के गर्दैनौं भनेर हामी पूर्ण रूपमा जिम्मेवार छौं, र यसको लागि हामी अरू कसैलाई दोष दिन सक्दैनौं; जुन हामीले आफ्नो शक्ति र प्रयासबाट चीज प्राप्त गर्नु पर्छ। बुद्धले हामीलाई एउटा मार्ग देखाउँदछ, तर हामी आफैंमा जानु पर्छ।
ब्लगबाट अन्तिम स्टोरीहरू
व्यवस्थापक2020-04-08T07:59:55+02:00अप्रिल 8th, 2020|0 टिप्पणिहरु
नि: शुल्क अनलाइन प्रशिक्षण
व्यवस्थापक2020-04-08T06:38:44+02:00अप्रिल 8th, 2020|0 टिप्पणिहरु
म को हु?
मेरो कथा तपाईंको लागि रोचक छ वा छैन भनेर म न्याय गर्न सक्दिन।
म बाँचें र अवस्थित थिए, चुनौतिहरू स्वीकार गरे, निराश दोहोर्याउन सम्भव छैन। म यो तथ्य लुकाउन चाहन्न कि निश्चित गर्वले मलाई समातेको छ। हुनसक्छ तपाई यहाँ सकरात्मक चीजहरु पनि महसुस गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो विचारहरु संग तिनीहरुलाई आफु संग लिन सक्नुहुन्छ।
प्रतिलिपि अधिकार © २०१ Sha शाओलिन रेनर - महान व्यक्तिको साथ डिजाइन गरिएको with छाप | गोपनीयता | संपर्क
यस वेबसाइटले तपाइँको अनुभव सुधार गर्न कुकीहरू प्रयोग गर्दछ। हामी मान्दछौं कि तपाईं सहमत हुनुहुन्छ, तर तपाईं सदस्यता रद्द गर्न सक्नुहुनेछ यदि तपाईं चाहनुहुन्छ भने। कुकी सेटिंग्सACCEPT
आवश्यक सँधै सक्रिय